LDRS စုံတွဲတစ်ချို့ အချစ်ရေးခိုင်မြဲကြတယ်ဆိုတာ ဒါတွေကြောင့်ပါ… – Trend.com.mm
အနေဝေးတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာ အချစ်ရေးမှာပိုပြီးခိုင်မြဲကြတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? တစ်ချို့ကတော့ထင်ကြမယ်။အနေဝေးရင် သွေးအေးသွားမှာ၊ဟိုမှာနောက်တစ်ယောက်တွေ့ချင်တွေ့နေမှာ၊ဝေးဝေးကလူကိုမချစ်နဲ့စသဖြင့်ပေါ့ LDRS အချစ်ရေးမျိုးက အဆုံးသတ်မကောင်းဘူးပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ …
Cornell တက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာချက်အရ အနေဝေးတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာ တစ်နေ့ကို သုံးလေးကြိမ်ထက်မနည်းအဆက်အသွယ်ရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အနေနီးတဲ့သူတွေက အမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ အနေဝေးတဲ့သူတွေကျတော့ ဝေးကွာနေတဲ့အတွက် တစ်နေ့ကို သုံးလေးကြိမ်လောက် ဖုန်းပြော၊ဗီဒီယိုကောလ်ပြောနေတတ်ပါတယ်။ဒါကပဲ သူတို့ရဲ့အချစ်ရေးကိုပိုပြီးခိုင်မြဲလာစေတာပါ။
နီးလွန်းရင်လည်းမမြင်တတ်ကြပါဘူး။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးနေတဲ့အခါမှ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း၊မခွဲနိုင်ကြောင်း မြင်လာတတ်တာပါ။အဲ့ဒီလိုမြင်လာလေ အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။လေ့လာချက်တစ်ခုအရ အနေနီးတဲ့ချစ်သူတွေထက် အနေဝေးတဲ့ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ပိုသိလာပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုပြီး ရင်းနှီးလာတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
အနေဝေးနေရတဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြန်ဆုံချိန်မှာ သူတို့အတွက် အချိန်ပိုပေးဖြစ်လာတယ်။သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလာတယ်။ဒါကြောင့် နှစ်ယောက်သားတွေ့ဆုံချိန်မှာ အချိန်တွေကိုအမှတ်တရဖြစ်အောင်ကုန်ဆုံးတတ်လာတယ်။ပြီးတော့ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ သူကလွဲလို့
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အနေဝေးတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ရဲ့အမူအကျင့်တွေ၊အပြစ်အနာတွေကို ပိုပြီးနားလည်လက်ခံပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အနေနီးတဲ့ချစ်သူတွေလောက် အမြဲတစေမတွေ့ရပေမဲ့ ဝေးကွာခြင်းကပဲ သူတို့ကို ပိုပြီးနီးကပ်သွားစေတာပါ။
အနေဝေးပေမဲ့ အချစ်ရေးခိုင်မြဲကြတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ နားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုပေးနိုင်ကြတာပါပဲ။အချစ်ရေးတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်ဖို့လိုအပ်သလို ယုံကြည်မှုရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အနေဝေးနေတာတောင် ကိုယ့်ချစ်သူကို အမြဲယုံကြည်မှုရှိနေဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုအပြည့်ရှိနေမှသာ အနေနီးတဲ့အချစ်ရေးဖြစ်စေ။အနေဝေးတဲ့အချစ်ရေးဖြစ်စေ ခိုင်မြဲမှာပါ။ဒီနေရာမှာ အချစ်ကလည်းအရေးပါပါတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်မရှိတော့ရင် ဝေးဝေးနီးနီး အဲ့အချစ်ရေးက ရေရှည်ခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အနဝေေးတဲ့ခဈြသူစုံတှဲတှဟော အခဈြရေးမှာပိုပွီးခိုငျမွဲကွတယျဆိုတာ သငျသိပါသလား? တဈခြို့ကတော့ထငျကွမယျ။အနဝေေးရငျ သှေးအေးသှားမှာ၊ဟိုမှာနောကျတဈယောကျတှခေ့ငျြတှနေ့မှော၊ဝေးဝေးကလူကိုမခဈြနဲ့စသဖွငျ့ပေါ့ LDRS အခဈြရေးမြိုးက အဆုံးသတျမကောငျးဘူးပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ လလေ့ာခကျြတှအေရ …
Cornell တက်ကသိုလျရဲ့လလေ့ာခကျြအရ အနဝေေးတဲ့ခဈြသူစုံတှဲတှဟော တဈနကေို့ သုံးလေးကွိမျထကျမနညျးအဆကျအသှယျရှိကွတယျလို့သိရပါတယျ။အနနေီးတဲ့သူတှကေ အမွဲတမျးတှနေ့ရေတယျဆိုပမေဲ့ အနဝေေးတဲ့သူတှကေတြော့ ဝေးကှာနတေဲ့အတှကျ တဈနကေို့ သုံးလေးကွိမျလောကျ ဖုနျးပွော၊ဗီဒီယိုကောလျပွောနတေတျပါတယျ။ဒါကပဲ သူတို့ရဲ့အခဈြရေးကိုပိုပွီးခိုငျမွဲလာစတောပါ။
နီးလှနျးရငျလညျးမမွငျတတျကွပါဘူး။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဝေးနတေဲ့အခါမှ တဈယောကျကိုတဈယောကျဘယျလောကျခဈြကွောငျး၊မခှဲနိုငျကွောငျး မွငျလာတတျတာပါ။အဲ့ဒီလိုမွငျလာလေ အမွဲတမျးအဆကျအသှယျမပွတျရှိနတေတျပါတယျ။လလေ့ာခကျြတဈခုအရ အနနေီးတဲ့ခဈြသူတှထေကျ အနဝေေးတဲ့ခဈြသူတှဟော တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျပိုသိလာပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပိုပွီး ရငျးနှီးလာတယျလို့ တှရှေိ့ရပါတယျ။
အနဝေေးနရေတဲ့အတှကျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပွနျဆုံခြိနျမှာ သူတို့အတှကျ အခြိနျပိုပေးဖွဈလာတယျ။သူတို့ရဲ့တနျဖိုးကိုသိလာတယျ။ဒါကွောငျ့ နှဈယောကျသားတှဆေုံ့ခြိနျမှာ အခြိနျတှကေိုအမှတျတရဖွဈအောငျကုနျဆုံးတတျလာတယျ။ပွီးတော့ဝေးနတေဲ့အခြိနျမှာ သူကလှဲလို့
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ အနဝေေးတဲ့ခဈြသူစုံတှဲတှဟော တဈယောကျရဲ့အမူအကငျြ့တှေ၊အပွဈအနာတှကေို ပိုပွီးနားလညျလကျခံပေးကွတယျလို့သိရပါတယျ။အနနေီးတဲ့ခဈြသူတှလေောကျ အမွဲတစမေတှရေ့ပမေဲ့ ဝေးကှာခွငျးကပဲ သူတို့ကို ပိုပွီးနီးကပျသှားစတောပါ။
အနဝေေးပမေဲ့ အခဈြရေးခိုငျမွဲကွတဲ့ခဈြသူစုံတှဲတှရေဲ့အဓိကအားသာခကျြကတော့ နားလညျမှုနဲ့ယုံကွညျမှုပေးနိုငျကွတာပါပဲ။အခဈြရေးတဈခုမှာ တဈယောကျကိုတဈယောကျနားလညျဖို့လိုအပျသလို ယုံကွညျမှုရှိဖို့လညျးလိုအပျပါတယျ။အနဝေေးနတောတောငျ ကိုယျ့ခဈြသူကို အမွဲယုံကွညျမှုရှိနဖေို့ဆိုတာမလှယျပါဘူး။ယုံကွညျမှုနဲ့နားလညျမှုအပွညျ့ရှိနမှေသာ အနနေီးတဲ့အခဈြရေးဖွဈစေ။အနဝေေးတဲ့အခဈြရေးဖွဈစေ ခိုငျမွဲမှာပါ။ဒီနရောမှာ အခဈြကလညျးအရေးပါပါတယျ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခဈြမရှိတော့ရငျ ဝေးဝေးနီးနီး အဲ့အခဈြရေးက ရရှေညျခိုငျမွဲမှာမဟုတျပါဘူး။